တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။ (A) လား ။ (B) လား ? | မာသင်
တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။ (A) လား ။ (B) လား ?
A: လုပ်ငန်းတစ်ခုက ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု (Product & Service) ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပြီး ဈေးကွက်မှာ နာမည်ကောင်း(Positive perception) ရလာတယ်။
B: လုပ်ငန်းတစ်ခုက ဈေးကွက်မှာ နာမည်ကောင်း (Positive Perception) ရအောင်အရင်လုပ်ပြီး ကိုယ့် ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှု (Product & Service ) အပေါ်မှာ ဈေးကွက်ရဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အမြင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ရွေးချယ်ဝယ်ယူမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။
A နဲ့B မှာ သင်ဘယ်အရာကို လက်ခံပါသလဲ ?
ဘာကြောင့် လဲ ?